Optimus Prime October 9, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| त्रिवी अन्तरास्ट्रिय मैदानमा आज समापन भएको चौथो संस्करणको इपिएल प्रतियोगिताको उपाधि चितवन टाइगर्सले जितेको छ।
चितवन टाइगर्सले पोखरा राइनोजलाई ४ विकेटले पराजित गर्दै पहिलो पटक एभरेष्ट प्रिमियर लिग को उपाधि जितेको हो।
पोखराले दिएको ११२ रनको लक्ष्य चितवनले १५.५ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर ११४ रन बनाउदै पुरा गरेको थियो।
टस जितेर पहिले फिल्डिंग गर्ने निर्णय गरेको चितवनले पोखरालाई १११ रनको सामान्य स्कोरमै रोकेको थियो।
पोखराको लागि असेला गुनरत्नेले सर्वाधिक ३४ रन, रिचर्ड लेभीले २६ रन बनाए भने कप्तान बिनोद भण्डारी २२ रन बनाउदै पेभेलियन फर्किएका थिए।
ओपनर बिपिन रावलले १७ रन जोड्दा अन्य ब्याट्सम्यानहरुले दोहोरो अंक बनाउन सकेनन।
एक समय राम्रो सुरुवात गरेको पोखराले सोहि लयलाई निरन्तरता दिन नसक्दा सामान्य लक्ष्यमै समेटिन पुगेको थियो।
पोखरालाई ११२ रनमै समेट्न कमल ऐरीले शानदार बलिंग गरेका थिए। ३.५ ओभर बलिंग गरेका ऐरीले २० रङ खर्चिएर ४ विकेट लिन सफल भए। करिम जन्नतले ३ ओभरमा १५ रन दिएर २ विकेट आफ्नो नाममा गरे भने सागर ढकाल र सोमपाल कामिले १-१ विकेट चट्काए।
११३ रनको बिजयी लक्ष्य पछ्याउदै जवाफी ब्याटिंगमा उत्रिएको बिजेता टोलि चितवन टोलि एक समय २० रनमा ३ विकेट गुमाएको अवस्थाबाट उक्लिएको थियो। मोहम्मद शेजादले ११ रन बनाउदा हसिम अन्सारी र करिम जन्नत शुन्य रनमै आउट हुन पुगेका थिए। तर मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान भिम सार्कीले ४५ बलमा ६३ रनको पारी खेल्दा चितवनले बिजयी यात्रा तय गरेको थियो।
चितवनका लागि दिलिप नाथ ले १८ रनको योगदान दिए भने राजेश पुलामीले १४ रन बनाए।
पोखराका लागि किशोर महतोले ३.५ ओभरमा २७ रन दिएर ४ विकेट लिएपनि टोलीलाई हार बाट जोगाउन सकेनन्। नन्दन यादबले २ विकेट लिदा अन्य बलर हरुले विकेट लिन सकेकन।
२० रन दिएर ४ विकेट लिएका कमल ऐरी म्यान ओफ द म्याच घोषित भए भने प्रतियोगितामा १४ विकेट लिएका चितवनकै सागर ढकाल प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए।
Posted in एभेरेस्ट प्रिमियर लिग, क्रिकेटTagged #everest premier league 2021 #hamro nepal sports
साफ च्याम्पियनसिप २०२१: नेपालले आफ्नो तेस्रो खेलमा भारतको सामना गर्दै
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत आज नेपाल र भारत आपसमा एक अर्काको सामना गर्दैछन्। तालिकाको शिर्ष स्थानमा रहेको नेपाल विरुद्धको खेल भारतलाई भने निकै दबाबले भरिएको छ। नेपाल विरुद्ध जित भन्दा अरु केहि नतिजा निकालेको खण्डमा भारतीय टोलि प्रतियोगिताको फाइनल बाट लगभग बाहिरिने स्थिति रहेको छ। नेपाललाई भने […]
आईसिसिले नेपाल क्रिकेट संघलाई दिने बजेट बढ्यो, अब झन्डै दोब्बर पाउने
ओमान बिरुद्ध नेपालको शानदार प्रदर्शन, सस्तैमा समेटियो घरेलु टोलि
पारस खड्काको सम्मानमा जर्सी रिटायर गरिने, को को छन् त यस्तो सम्मान पाउने?
शृंखला क्लिन स्विप गर्ने दाउमा बंगलादेश !!
चेन्नाई सुपर किंग्सलाई चौथोपटक आइपिएल उपाधि